recent – www.bethanchokkhabar.com
काभ्रे (धुलिखेल) - जिल्लामा आज २ जनाको उपचारपछि कोरोना संक्रमणमुक्त भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ । जिल्लाका कुल संक्रमित संख्या ३३ सय ७ मध्ये ३२ सय २९ जनाको उपचारपछि कोरोना संक्रमण...
काभ्रे (बनेपा) - जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वडा नं ८ स्थित बनेपा हेल्थ केयरले नियमित रुपमा रेडियोलोजिस्टबाट सेवा सुचारु गरेको छ । शुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको बनेपा हे...
पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लिग वानको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । शनिबार राति घरेलु टोली एन्जर्समाथि १–० को जित निकाल्दै पीएसजी यस सिजन पहिलो पटक लिग वानको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । डिफेन्डर लेविन...
प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीले साउथह्याम्टनलाई हराएको छ । शनिबार भएको खेलमा लेस्टरले साउथह्याम्टनमाथि २–० को जित निकालेको हो । जित सहित लेस्टर तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । खेलको ३७ औं म...
डा. अमिरबाबु श्रेष्ठ थापाथलीस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका पूर्वनिर्देशक हुन् । सोही अस्पतालमा कार्यरत डा. श्रेष्ठ गत कात्तिकमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएपछि आयुर्वेदिक औषधिकै प्रयोग गरेर निको भए ।...
मुलुकमा पहिलोपटक सहकारी संस्थाहरुबीच कारोबार सुरु भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार हव कोअपरेटिभ सर्भिसले बैंकहरुमा जस्तै अन्तरसहकारी कारोबार सुरु गरेको हो । सह...
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालमा तत्काल आवश्यक पर्ने कोभिड भ्याक्सिनको पूर्तिका लागि भारत तयार रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किने क्रम...
अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्राचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैनन् । आयोगमा...
तीन दिनअघि आफू सामूहिक बलात्कार परेको भन्दै ओखलढुंगाकी १७ वर्षीया युवतीले प्रहरीसमक्ष रोइकराइ गरिन् । उनले आफूलाई रातभरि पाँच जनाले बलात्कार गरेको प्रहरीलाई बताएकी थिइन् । युवतीको उजुरीपछि प्रहरी पीडक...
- सन्दीप के.सी. स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, धुलिखेल नगरपालिका कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो सहायक पाचन अंग हो । यो लगभग १ देखि १/५ केजीको हुन्छ । यसका काम अनेकौं हुन्छन् । यसले ग्लुकोज उत्पादन र भण...